IKhabhinethi itawuli yangasese
IFot Filler Faucets
Ikhaya / Blog / Kwigumbi lokuhlambela laseJapan, iTawuli yeKhabinethi ibhityile ukuya kwiisentimitha ezili-10, ukuGcina ngokucocekileyo
Kwigumbi lokuhlambela laseJapan, iTawuli yeKhabinethi ibhityile ukuya kwiisentimitha ezili-10, ukuGcina ngokucocekileyo
2021 / 01 / 16 uhleloBlog 12494 0
Isikolo soShishino lokuhlambela i-2020-11-15
Indawo yokuhlambela ayikho nkulu, ungagcina njani ngokufanelekileyo xa uhlobisa? Ufuna ukufaka ikhabhinethi kwaye ukhathazeke ngokuhlala kwindawo. Kodwa kwezi bhotile kunye neengqayi kunye netawuli, zibekwa phi?
Into elungileyo kukuba ndinomhlobo owafunda eJapan kwiminyaka emibini eyadlulayo, wandixelela ukuba eli nqaku linokudluliselwa ngokupheleleyo kuyilo lwasekhaya lwaseJapan. Faka ikhabhathi yetawuli enobunzima obuyi-10 cm, iileya eziphezulu nezisezantsi zokugcina izinto ezinemisebenzi emininzi, ukusebenza ngamandla kunamandla kakhulu!
Kutheni le nto izindlu zangasese zaseJapan zinje ngolu luyilo?
▼Sukuhlala kwindawo efanelekileyo kumagumbi okuhlambela amancinci
Ikhabhathi yetawuli enjalo, ubunzulu ngokubanzi beesentimitha ezili-10 kuphela. Nokuba oku kubethelelwe eludongeni, okanye eludongeni oluvulekileyo, ngekhe kuchaphazele imisebenzi yesiqhelo yendawo yokuhlambela!
▼Ugcino oluNinzi lwemisebenzi emininzi
Le yikhabhathi ecekeceke, ukugcinwa kweetawuli ezininzi akuyongxaki! Umgangatho ophezulu, ophakathi kunye nolondolozo olusezantsi. Umbindi womnyango wekhabhathi usetyenziselwa ukwenza ugcino oluvaliweyo, umphezulu usetyenziselwa ukwenza izahlulelo. Oku kulandelayo kunokugoqwa ngokuthe ngqo njengocango lwekhabhathi yeshelfu, esetyenziselwa ukubeka utshintsho lwempahla. Kwaye emazantsi yibhola yetawuli ejikelezayo, akukho balcony. Iitawuli ezimanzi zinokumiswa ngokuthe ngqo kule khabhathi yetawuli, hayi indlela ekrelekrele ngayo!
Ingagcinwa, ibekwe, ingomiswa, ngubani ongayithandiyo ikhabhathi esebenzayo?
▼Umile kwaye Ukwahlula okumanzi
Kungenxa yendlela yokugcina egqinsiweyo, ikhabinethi ayinyuswanga ngqo emhlabeni. Isikhundla esisezantsi sokumisa itawuli sithe ngqo, ngenxa yoko akukho ndawo yokuhlambela ifileyo. Kwikhabhathi yokwahlula okumanzi neyomileyo, nawe awunakukhathazeka malunga nokufuma kunye nokuvunda, ubomi obude benkonzo.
Kwakhona indawo yekhabhathi yetawuli inokucwangciswa ngokungaqhelekanga: ibekwe kwicala lesinki. Xa uhlamba, kulula ukuba uthathe kwaye ubeke iitawuli. Inokubekwa eludongeni lwecala ukuya kwishawa, yotshintsho lwempahla, ungakhathazeki ngokuba kumanzi!
Ngokukhawuleza emva kokuba ndive oko kuthethwa ngumhlobo wam, andizange ndikwazi ukulinda ukucela inkosi ukuba igoduke ize iphinde iyifake. Gcina indawo, ugcino oluqinileyo. Oku kufanelekile kwigumbi lam lokuhlambela elincinci elincinci leemitha ezi-3 zeemitha, akumangalisi ukuba wonke umntu adumise indawo yokugcina yaseJapan yokuhombisa. Kodwa zininzi kakhulu iindawo zokufunda, kwaye ekugqibeleni umhlobo wam wabelana ngeenkcukacha zoyilo zangasese ezi-2 zaseJapan, ndaye ndagqiba kwelokuba ndihombise ikhaya lam ngokufanelekileyo ↓
Iinkcukacha enye: Faka iBhari yokuBamba kwicala leNdlu yangasese
Ke xa uvuka uhleli kwindlu yangasese ixesha elide, unokuba nendawo yokunceda. Ingakumbi kubantu abadala abanobunzima bokuhamba. Xa icala lendlu yangasese linomtsalane, ukhuselekile kwaye ulungile!
Iinkcukacha zeBini: Yandisa iSink ukuya kwicala langasese
Yandisa umphezulu weshelufu, kwaye wolule isithuba ukuze unyuse ubungakanani begumbi, elisetyenziselwa ukubeka iitawuli zamaphepha, iiselfowuni. Oku akunakulunga ngakumbi.
Iinkcukacha ze-3: Faka i-Crossbar eneeHwegwe kwicala laseSink
Intlama yamazinyo kunye nezinye iimveliso zokucoca ziya kuxhonywa zodwa. Ukwahlula okumanzi nokomileyo, ukunciphisa ukuzala kweebhaktiriya, kodwa nokukhulula indawo yesitya sokuhlambela!
Ngaphambili :: Nokuba igumbi lokuhlambela lingaphantsi kweemitha ezi-5 zesikwere, indawo emanzi kunye neyomileyo ayinzima ukundoyisa! next: Uphengululo lweefaquet zasekhitshini laseDelta: Isikhokelo sokuthenga ngo-2021 seefayili zeDelta zasekhitshini
Iingcebiso ezinxulumene noko
Ingqele Igagasi Kwakhona! Iimveliso zegumbi lokuhlambela, Ungawuthintela njani ubanda?
2021 / 04 / 11 683
Faka iishelufu kwindlu yangasese, kwigumbi lokuhlambela kwangoko phila ngaphezulu kweemitha ezi-5 zesikwere!
2021 / 04 / 11 533
Uyifaka njani indawo yokuhlamba ngakumbi? Qala kwezi nkalo zine ...
2021 / 04 / 10 345
Ukulungiswa kwakhona kwegumbi lokuhlambela, imivumbo emi-5 yokufumana utshintsho oluhle
2021 / 04 / 10 435
"Ixabiso eliphezulu" legumbi lokuhlambela, liyamangalisa, kukho umbono ...
2021 / 04 / 10 520
Awazi ukuba uyikhetha njani ibhafu? Ezi modeli zingama-31 zikunika ukuphefumlelwa
2021 / 04 / 10 575
Cofa ukuze ucime impendulo
Cofa apha ukucima impendulo.